'SA investors wary of Zim environment' - Business Daily News Zimbabwe
Prospective South African investors have expressed concern over bureaucracy and inefficiencies in the Zimbabwean business environment.
"Prospective investors articulated a desire to have a consolidated view of the information and regulations pertaining to investment in Zimbabwe," said Msipa, who was part of the South Africa-Zimbabwe business forum that met in Pretoria last week.
The delegation was part of President Robert Mugabe's official three-day State visit to neighbouring South Africa focusing on bilateral and economic cooperation as well as regional and continental matters.
"As you know, both IDC and Development Bank of Southern Africa have already provided debt-funding on some important infrastructure projects in Zimbabwe," he said.
This comes as Zimbabwe - currently ranked number 170 out of 189 economies on the World Bank Doing Business Indicators - has been failing to formulate policies that compel registration of foreign start-up business as well as realigning laws in order to create a one-stop investment shop.
"Of concern has been the consecutive downfall of the country's ranking on the World Bank Doing Business Indicators. This does indicate that the cost, time and procedures for doing business in Zimbabwe is high for locals and so deters even the foreign investors," said the World Bank.
Zimbabwe's poor investment climate has seen foreign direct investment declining significantly in recent years, amounting to $376 million last year from $410 million dollars in 2013.